Date My Pet » 3 Tips To Dating Munguva bvunzo Nguva
3 Tips To Dating Munguva bvunzo Nguva
Last updated: Jan. 19 2021 | 2 Maminitsi verenga
Ndiyo iyoyo gore zvakare. Bvunzo nguva yave snuck pamusoro pako uye atova ari bane chokuvapo kwenyu. Zvisingaverengeki zvose-nighters, mazuva mupfungwa uye maawa magariro akadaro anoita chinhu mudzidzi chii hwako chinosanganisira. Ndakatoiverenga famba kembasi uye ainzwa sokuti ndakanga ndiri Zombie ZVAKAZARURWA- ndizvo kushayikwa hope uye ovhadhozi coffee uye zvihwitsi anoita kuti avhareji mudzidzi.
Chimwe mugumisiro bvunzo nguva ndechokuti tose kuti vakaneta pane imwe nguva uye kutora panze pamusoro pavanhu pedyo nesu. Izvi hazvisi akanaka nokuda kwenyu kufambidzana upenyu. Zvichida sokuti hamuna evanhu upenyu uye kuti hwako mutambo ari achiburuka zvaimutambisira. Kana usina akaziva izvozvo asi, uri kuda.
sezvinei, haufaniri kuita neshungu. izvi 3 Mazano kunogona kukubatsira ace that bvunzo dzenyu apo kuramba yakakwirira mucherechedzo kwako kufambidzana upenyu.
Funga kumunyima pamusoro zvokunyengetedzwa yako.
Bvunzo nguva inguva inokosha yako dzidzo nebasa, saka zvingava akachenjera pfungwa kuchitonhora pamusoro misi. Sezvo uchida kuita zvakanaka pabvunzo dzako, haudi pangozi kuburikidza kurasikirwa nguva inokosha yokudzidza nokuda vaviri yemichindwe. Paunenge uchidzidza zvakadzama Masvomhu kwesayenzi uye mabhizimisi pezviitiko, kudzidza kwenguva pfupi kutendeuka pasi norunako yenyu ichava zvinobatsira iwe nemumwe wako.
Balance anongova kukosha sezvo zvine caffeine.
Red Bull, ayizi kirimu, chips kofi sokuti kukudziridza yakakwirira azvipire kukosha munguva bvunzo nguva. zvisinei, havangagamuchiri kuva zvinobatsira kana totaura nezvokudanana, saka Nechiyero chinonyengedzera shamwari yako itsva yakanakisisa. harizovi kukuitirai chinhu chakanaka kana uchidzidza zuva rose, usiku hwose, kumboona chiedza chezuva uye regai kutora chero hwatsvuka. Kuramba pakati nepakati kudzidza uye anoputsa zvinokosha uye rave rikaratidzwa munyatsonzwisisa kudzidza zvaunogona uye bvunzo waivako.
Richishanda nguva unwind, kushushikana, uye patinodziya mushana, patinoravira zvimwe chiedza chezuva chinoita. kudzidza izvi hwatsvuka kuva akakodzera mikana kupedza nguva yako nevadiwa. Funga kuva firimu manheru ose saka kazhinji kana kuona paTV pamwe chete.
Nerumwe, Kuunganidza panze uye kuva kushingaira wakanaka Muitiro unobatanidza basa, uyewo vanobatsirwa utano hwako uchitikurudzira- kuona sezvo zvaunodya inoitwa shuga caffeine. Enda nokumbofamba pakati magariro akadaro anoita muzvirongwa uye rant pamusoro kunounzwa yepamusorosoro upenyu dzidzo. Fresh mhepo achachengeta uropi hwako yakachena.
Kana upenyu hwayo pfupi Chats pamusoro Skype, nokungotaura pafoni kungonzwa izwi ravo, Pakunopera usiku kuvambundira muzvirongwa kana hope-overs, nechokwadi iwe uine nepakati pakati basa uye mutambo.
Uyu munhu runako hazvidi tsananguro. Musakanganwa kuti kupemberera kamwe bvunzo dzenyu muri vakakunda! Ronga chinhu zvinonakidza kuti vaviri zvaungaita kupemberera mukukunda ichazununguswa bvunzo dzenyu dzose uye kuti utangezve chokuita yako. Kana uri munhu anoda Beaver uye kuronga chinhu pachine ipapo aizopa iwe chinhu kutarisira.
izvi 3 Mazano kuchakubatsira kuramba moto murudo hwako munguva chipatapata bvunzo nguva. Nokudzidza tidbits aya ruzivo pamwe enyu namapoka zvisingaverengeki, uchazonakidzwa kukunda bvunzo dzenyu uyewo ako kufambidzana upenyu sezvo.
10 Nzira To Create A Bodacious Bachelorette Pad!
5 Matanho Kukunda Ukama Communication Zvinotadzisa
Iti No To Chisinganakidzi First Misi